Ijisi lesipinashi: ukubunjwa, iipropati kunye neenzuzo
Isipinashi sisityalo sonyaka esihlambulukileyo sityalo. Ilizwe lakubo yiPersi. Isipinashi sithandwayo ukususela kwixesha elidlulileyo. NgeMinyaka Ephakathi, kwiimarike, abahwebi bathengisa ngefomu ebilisiwe kunye nentsholongwane, kunye nangendlela yeebhola ezincinci. Ekuqaleni kwekhulu leshumi elinesixhenxe, abantu babefunde ukukhula iintlobo ezininzi zeli sityalo. Kwaye kwafunyanwa amandla okuphilisa isipinashi: isipinashi exutywe noshukela yayisetyenziswe njenge-laxative.
Iingcali zanamhlanje kwiiphando ezininzi ziye zityhila iimpawu ezininzi ezinomsebenzi wesipinashi. Iqukethe iivithamini ezininzi, i-microelements, kwakunye neeprotheni ze-carbohydrate.
EFransi, isipinashi ibizwa ngokuba yi "broomstick" kunye "nkosi yemifuno". Isipinachi ikhulile kwiindawo zonke zaseFransi. AmaFrentshi amthandayo ngokuba akwazi ukuvula inkqubo yokutya kwaye ngexesha elifanayo unempawu ezibalaseleyo. Ijusi "isisu esiswini" sibuyisela kwaye sijonge umsebenzi wegciwane lesisu.
Ukubunjwa kwejusi yesipinashi
I-Sokshpinata iyigugu lokwenene lomzimba womntu. Ucebile nge calcium nobhedu. Iqukethe iivithamini C, K, E, i-provitamin A, iodode, i-antioxidants yemvelo, i-folic acid. Ukubunjwa kwejusi yesipinashi kubandakanya i-manganese-into ebalulekileyo ekusebenzeni kwengqondo ephakamileyo, ukuphelelwa kwesibindi, i-thyroid gland, ukujongwa kwemisebenzi yenkqubo yokuzala. Ukongeza, i-manganese iyimfuneko yokuveliswa kwama-hormone yolonwabo kunye nokwakheka kwegazi namathambo, kwaye kunceda ukukhangela ulusu kunye neenwele eziphilileyo. Iimpawu eziqulethwe kwipinishi yesipinashi, zenze igalelo ekusebenzeni ngokuqhelekileyo kwezihlunu, ngakumbi intliziyo. Ukusebenzisa i- sokshpinata, unokuqinisa amandla omzimba kunye neendonga zamathumbu. Shpinatpomogaet kunye neengxaki zokujonga amehlo. Isipinashi iqukethe i-oxalic acid, kunye nesipinashi sayo ngaphezu kwamazambane amaxesha angama-8 kunye namaxesha angama-64 ngaphezu kweetamatati.
Iipropati ezisebenzayo zesipinashi
Isiraphu sesipinashi isiphilisa sonke isondlo sesisu. Iimpahla eziqhelekileyo, izakhiwo ezichasayo nezidityanisi. Oogqirha batusa ukusetyenziswa kwansuku zonke kwesojinashi yokutya ngenjongo yokuthintela ukungabikho kwe-vitamin. Ijusi lesipinashi kunye nabantu abanesistim se-nervous nutrition, izifo zamaphaphu, i-gastritis kunye nezinye iingxaki zokugaya ukutya zilungile. Ijusi yesipinashi inomphumela onenzuzo kwesikhumba, iinwele, amazinyo kunye neentlobo. Yindlela yokukhusela i-periodontal isifo se-inguivitis. Kwakhuthaza nokukhula kweenwele kwaye kuvimbela ukungathathi kwabo.
I-Sokshinata kufuneka isetshenziswe ngokukhawuleza emva kokulungiswa, ngeli xesha iinzivithamini ezininzi zigcinwa kuyo. Ungayigcina ijusi elifakwe kwifriji ayinatye. Ukuba uyigcina ngaphezulu, ijusi evela kwintsimi iya kuba yingozi. Ngenxa yezinto ezincinci kwi-juice, i-nitric acid compounds eveliswayo inokuvelisa ukubonakala kweemethhemoglobin kwijusi, into engabangela i-neusea, intloko yesisu, utyumbe, ubuthathaka obukhulu bomzimba ngobuninzi. Ukuba inani lejusi ephangiweyo likhulu, imiphumo ingaba yimbi ngakumbi, kunokubakho ukuphefumula okufutshane, iintlanzi, ukuphazamiseka kwentliziyo. Kodwa ungakhathazeki, zonke ezi ndawo azifaki kwijusi yesipinashi esitsha.
Indlela yokusela ijusi yesipinatshi
Ukuba wanquma ukwenza i-socoterapy, kwaye nje ukuphathwa ngopinashi, uze uxhalele ugqirha, kwaye uthathe ijusi phantsi kolawulo lweengcali. Nsuku zonke awukwazi ukuthatha i-milliliters ezingama-300 zejinishi yesipinashi. Ukuba uyayiphuza ngaphezu kokuqhelekileyo, ngoko unokukhuphaza ubuthathaka.
Ipropati ekhusela kakhulu iyinambumba eshicilelwe ngokutsha, ifana nayo kwisipinashi sesipinachi. Ngaphambi kokuba udibanise ijusi, fumana isipinashi kwifriji kwindawo ethile kwisiqingatha seyure, ukuze ungayifaki ijusi ngaphandle kwesipinashi ebandayo okanye ungayiphuzi okanye uyiphuze. Xa isipinashi ithola ubushushu bendawo, kufuneka ihlanjwe ngokucacileyo, imiswe kwaye idibanise. Ukuyilungisa iJusi ayikwazi. Kungenxa yokuba xa kutyumkile, ezinye zezinto ezincedo ziphuma.
I-Sokshinata luncedo kulabo abanesimo esinzima sokubanjwa. Emva kokusela ijusi iintsuku ezi-4 ukuya ku-5, ungayikhupha le ngxaki. Ukomeleza ukukhusela, kwaye ngokwenene umzimba wonke, i-juice isipinki kufuneka ixutywe kunye necawu ngokulinganisela: enye ipoyiji ngeglasi yejusi. Phuza umxube kathathu ngosuku ngaphambi kokutya. Ijusi yesipinashi ilungile kuba kuyimvelo. Izinto eziqulethwe kwiipilisi, amaconsi kunye nezinye izidakamizwa zamakhemikhali, zihlala zithintela umzimba, kwaye ngamanye amaxesha zibangele ukuphendula. Ngoko ke, ukuba unesiqholo, ungagqibi ukuya kwi-pharmacy ngamaconsi, okanye ukuthenga kangcono isipinashi, fakela ijusi kunye nokusela.
Ukungqinelana nokuzikhethela kokuthatha i sokaszpinata
Isipinashi iqokelela onke amandla ngo-Agasti-Septemba, ngoko i juzi, ixutywe kulezi nyanga, iivithamini ezicebileyo. Amaqabunga afanele abe yintsha kunye neentsholongwane, ama-bugs-cockroaches. Kulezi zinto ziqulethe izinto ezininzi ezincedo.
Abantu abaphethwe yi-urolithiasis, igciwane, isifo sesifo, isibindi, i-colitis kunye nokuphulwa kwamanzi esetyuli yamanzi, i-juice yesipinashi ayinakusetyenziswa. Ngenxa yokuba iqulethe inqwaba ye-oxalic acid. Kodwa abantu abanesisindo seentsholongwane banciphisa ijusi yesipinashi ngexesha elifanelekileyo.
Uxinzelelo oluphezulu lwamavithamini kunye nezinto ezilandelelisayo kwijusi ziya kuba seminithi yokuqala yeshumi emva kokucoca. Ijusi ayifuni ukuhlanjululwa. Kodwa xa abantu beyithatha ngesisu nangentsholongwane yamathumbu, kunye nabantu abaneentsholongwane eziphefumulayo, ngoko kuyimfuneko ukuluhluza ngaphandle kwejusi. Ijusi ayifanele isetyenziswe ibilisiwe, kodwa ibuye ifuthe, njengoko i-oxalic acid idiciliziwe kwaye ihlala kwizintso, ngaloo ndlela idala iingxaki.
Ngoko ke, sebenzisa ingqondo yesipinashi, jonga iingcebiso zogqirha xa usebenzisa le juice yommangaliso, kwaye ube nempilo.
Ukukhulula imini kwiipulo
I-Kostyanika, izakhiwo eziwusizo
Isicwangciso sokutya okunempilo, ukulingana kwemini
Ukutya okuphantsi kwekhalori
Abaqhibi basekhaya: inzuzo kunye neyingozi
Ukutya okuncedo kwesikhumba
Ngokukhawuleza ukucoca indlu emva kweeholide?
I-hump entanyeni: njani ukuyilahla?
Iifumba ezenziwe ngekhaya ezineziqhamo - iipencake ze-apple, zokupheka kunye nesithombe
Unokunyamekela njani ihlobo ngeenwele ezinde?
Ama-muscular for the muscle of face
Umtshato oqhaqhaqhaqhoyo uTimati - umvakalisi akazange amshiye umfazi wakhe wokuqala, ividiyo
Ukupheka kweCaucasian cuisine (inxalenye yesibini)
Ukupheka kwiikhosi zesibini ezonwabisa
Umtshato nomntu ohlukanisile
I-yoga yomntwana ukusuka ekuzalweni ukuya kwiiveki ezisibhozo: apho uqala khona
Izinwele zokunyusa iFebhuwari: ikhalenda yenyanga 2014
Indlela yokutshata, ukuba ungaphezu kwe-30: isikhokelo esifutshane
Hero of "Bach-4" uAlexei Vorobyov wavuma ngokusebenzisa iziyobisi ezingekho mthethweni, ividiyo